ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မတော်တဆလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ? – Trend.com.mm
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မတော်တဆလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ?
Posted on September 11, 2019 by Noel
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးက လမ်းခွဲပြီးသားချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့အတွေးထဲမှာ မကြာခဏ၀င်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ပြတ်စဲပြီးသားရည်းစားနဲ့လမ်းမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါ တစ်ချို့ကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲရှောင်သွားကြပြီး တစ်ချို့ကတော့ စကားပြောနှုတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်။တစ်ချို့ကတော့ရည်းစားဟောင်းအရိပ်အယောင်မြင်တာနဲ့ ရင်တုန်ပြီး ထွက်ပြေးတတ်ကြပါတယ်။
သိထားရမှာကလောကကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ တစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့တော့ပြန်ဆုံ
ရတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ သင့်ရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နှုတ်ဆက်နိုင်အောင်၊ရည်းစားဟောင်းကို အလှပဆုံးပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုရှာတွေ့ထားပါတယ်။
လမ်းခွဲပြီးပြီ၊အချိန်ကာလလည်းအတော်အတန်ကြာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားစဉ်းစားပါ။တကယ်လို့များလမ်းမှာ မတော်တဆဆုံခဲ့ရင် ဘာပြောမလဲ၊သူကရော ဘာပြောမလဲပေါ့။နည်းလမ်းကတော့ ရည်းစားဟောင်းရှေ့ကနေ အယဉ်ကျေးဆုံးရှောင်ထွက်နိုင်ဖို့ ယေဘူယျတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ချို့ကိုစဉ်းစားထားပါတဲ့။ လေ့ကျင့်ထားပါ။အလေ့အကျင့်ရှိတော့ ရုတ်တရက်ဆုံလာရင်တောင် နေသားကျပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလားဆိုတာမျိုးပေါ့။လမ်းခွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Say hello first! ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သင့်ကိုယ့်သင်မရှိသလို ပုန်းနေဖို့မလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာက စိတ်ကို သေချာငြိမ်အောင်ထားဖို့ပါပဲ။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့လို့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီးအယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်နေရင် သူ့ဘက်က သင်ကသူ့အပေါ် ခံစားချက်တွေကျန်နေသေးမှန်းသိသွားပြီးသင့်ကို အားနာသလိုလုပ်ရင် ဒါကသင့်ကိုပိုပြီး ခံစားရဆိုးစေပါတယ်။
သူနဲ့တွေ့ရင်ဘာပြောရမလဲ၊ဘာမေးရမလဲ ကြိုတင်မစဉ်းစားထားဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါ။”နှုတ်ဆက်ပါ။ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ဘာညာစကားစမြည်ပြောပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စကားတစ်ခုခုနဲ့ နှုတ်ဆက်ပြီးရှောင်ထွက်ပါ”။ဘယ်သူမှ ရည်းစားဟောင်း နဲ့အကြာကြီး စကားပြောရမှာ နှစ်သက်မယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ကဲ ကဲ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဘားတွေ၊ပါတီတွေမှာဆုံလာရင် အရက်ကိုအမုန်းသောက်မယ် ၊ကဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုဖျက်လိုက်ပါတော့။အရက်က စိတ်ခံစားချက်ကိုထွေပြားစေပါ တယ်။ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပျော့လာစေပါတယ်။သူက သောက်ဖို့အဖော်စပ်ရင်တောင် ချိုချိုသာသာငြင်းပြီးရှောင်ပါ။
တကယ်လို့များကိုယ့်ရည်းစားဟောင်းက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ပလူးပလဲနေတာကိုမြင်ခဲ့ရင် သ၀န်တိုစိတ်နဲ့ ဘာမှမတုံ့ပြန်မိပါစေနဲ့။ရည်းစားဟောင်းဆိုတာကိုအမှတ်ရပါ။ ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့ရည်းစားဟောင်းကြောင့် ဒေါသထွက်နေရင် နှစ်ခါရှုံးတာပါပဲ။ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘယ်သူနဲ့ပဲ Q နေ Q နေ လေးစားမှုနဲ့အယဉ်ကျေးဆုံးဆက်ဆံပြုမူပါ။ဒါက ကိုယ့် Role ကိုယ်မြှင့်တဲ့သဘောပါပဲ။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရင်တွေပရမ်းပတာခုန်ပြီး ချွေးစီးလက်စီးတွေထွက်၊ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်မနေပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပါ။သူထားခဲ့တာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လမ်းခွဲခဲ့တာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာ ဘုရင်မပါ။ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့။ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပြောဆိုပြုမူပါ။
ထီးမပါလာတဲ့နေ့တွေမှာ မိုးရေမိခဲ့မယ်ဆိုရင် …